Adam AF2 Berdoa Ditunjukkan Jalan Yang Benar
Bangla come, Bangla stay!
In Myanmar, tensions simmer between locals and Chinese newcomers
မြန်မာမီဒီယာများ မေ့လျော့နေသည့် နိုင်ငံ့ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် တာချီလိတ် နယ်စပ်သတင်း
အို-ဘားမားနဲ့ ဒေါက်တာအေးမွန်တို့ ပါဝင်သော တတိယလှိုင်း တစ်ခန်းရပ် ပြဇာတ်
[LAGI GAMBAR & VIDEO] Bukti Perhimpunan Hijau Anti-Lynas Aman Bila Tiada Provokasi
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရာဇဝတ်မှုများ အမှု့မှန်ပေါ်ရေးအတွက် ပြည်သူတဦးမှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ သမ္မတထံပို့
The Burmese monks who preach intolerance against Muslim Rohingyas
Whenagenocide is nota‘genocide’, Maung Zarni
Colonel Richard Kemp: Special Interview: Former Commander of
Myanmar’s Step-by-step Approach toward Rohingya Genocide and Ethni-cide
[BERGAMBAR & VIDEO] 20,000 Aktivis Himpunan Hijau Ke Dataran Merdeka (updated)
Many Years Ago..as I recall..
Antara Video2 Menarik..
Ibu Tergamam Anak Kena Cabul Dengan Polis
The Female Dentist
Pencacai UMNO Jahil Agama Cuba Pertikai Solat Jenazah Oleh TG Hj. Hadi
Usaha Halang Pejalan Kaki Anti-Lynas, Dataran Merdeka Ditutup Tiba-tiba
Posted: 25 Nov 2012 09:23 AM PST
Kuala Lumpur – Nama penyanyi lelaki, Mohd Aizam Mat Saman atau dikenali dengan nama Adam seakan-akan senyap seketika dari dunia nyanyian jika di bandingkan sewaktu di awal kemunculannya.
Penyanyi yang berasal dari negeri Sabah itu dilihat kurang menonjol di kaca televisyen mahu pun acara anugerah yang dianjurkan industri seni tempatan.
Adam yang mengakui kurang menonjol di khalayak ramai kerana sedang menjalani kehidupan secara sederhana.
Bagi jejaka yang masih muda itu, dirinya ketika ini sedang mendalami ilmu agama dan ilmu perubatan Islam.
Pun begitu, Adam masih lagi menerima undangan untuk melakukan persembahan asalkan waktu untuk dirinya mengabdikan diri kepada Tuhan tidak terganggu.
"Apapun saya masih menyanyi. Islam tidak menghalang kita melakukan perkara yang disukai asalkan tidak melanggar perintahnya seperti meninggalkan solat lima waktu," kata Adam yang dipetik dari laporan MyMetro.
Bukan itu sahaja, untuk memastikan niatnya untuk berubah sejajar dengan tuntutan Islam, Adam banyak membataskan dirinya dari melakukan perkara yang ditegah dalam Islam.
"Saya juga menjaga batas pergaulan dengan peminat perempuan dan tidak lagi bersalaman, tetapi kalau nak bergambar dengan saya tiada masalah. Perubahan ini berlaku secara perlahan-lahan kerana tidak mahu menimbulkan rasa riak," katanya.
Walaupun Adam masih lagi mendalami ilmu agama, dia tidak mahu dirinya kelihatan riak dengan ilmu yang didapati.
Pun begitu, Adam mempunyai pegangan tentang perangai manusia yang dia tidak gemari kerana kemungkinan sikap itu mampu mempamerkan imej umat Islam yang tidak baik.
Justeru, Adam akan sentiasa berdoa agar Tuhan sentiasa membimbing dirinya ke arah dan jalan yang benar.
"Saya tak berapa berkenan melihat mereka yang baru memakai kopiah dan bertudung terus menjatuhkan hukum kepada orang lain. Janganlah terlalu drastik kerana setiap orang ada bahagian masing-masing dan yang sebaiknya kita doakan agar dia juga turut berubah.
"Dalam solat saya mohon petunjuk daripada Allah dan inilah jawapan yang diberikan kepada saya iaitu memandu arah saya belajar perubatan Islam," luah Adam. -mynewshub
Posted: 25 Nov 2012 08:11 AM PST
Come tomorrow (Monday), more than 20,000 Bangladeshis are expected to arrive at the KLIA to work in our plantation sector.
They are part of the successful G to G arrangement by Hisham KDN and Subra Human Resource to solve the problem of 'worker shortage' faced by major plantation employers like Felda, Sime Darby, Tabung Haji and others.
Hisham and Subra must be proud for such an arrangement with Dhaka. It reflects how benevolent Malaysia is when attending to the needs of the industry. Furthermore, the kickback from suchadeal is not small.
Appointed agents usually charge between RM1,000 and RM1,500 to bringaBangladeshi to Malaysia but this new batch is free of any agent's reach. However, it is not free because their employers - apart from having to pay the levi and other charges - will surely have to allocate 'some' for those who bring them in.
I was told thata'token' of RM750 is imposed for each worker. This means 20,000 workers will easily translate to RM15 million the amount of kickback for those involved in the arrangement.
A-aaahhh... general election is coming!
But the key issue here is not the kickback. Its 'so normal' for ministry officials to make money from suchadeal. Itsaknown fact and its not necessary for me to elaborate further.
From tomorrow onwards, more and more Bangladeshis will be brought in to work in the plantation sector, and soon for the manufacturing industry. By end of the year, about 100,000 of them will arrive in Malaysia under the arrangement.
This is what our government is all about. They will take pride in such an arrangement, wanting to be seen as caring enough in fulfilling the needs of the industry. Diplomatically, we look awesome but morally we are doomed asa'half past six' country for failing to take care of the foreigners who are already here.
I am not sure if KDN sec-gen Datuk Seri Rahim is involved in this but his pledge to be the 'force against human trafficking' is onlyadream and empty words. He is too busy to please the minister!
The problem with KDN and other ministries is that, they don't listen to the ground. They love the credit so much for being able to cater to demands of the industry. They couldn't be bothered what will happen to the workers once their contract ends.
There are about 300,000 'stranded' Bangladeshis in the country, with no proper job and contract. Why? Because they are part of the 1,000,000 workers brought in from Bangladesh more than 15 years ago to work in various sectors in Malaysia.
Most of them are now aged 45 and above, some hiding in remote areas because their visa, permit and passport are no longer valid. Their High Commission in Kuala Lumpur is havingabig problem to identify, register and help them go home.
But they refuse to leave Malaysia as they don't have anything left in their country to survive on. Before they left about 15 years ago, they had sold off their land and house to raise about RM30,000 (each) needed as the 'passport' to come to Malaysia.
Since it is not our policy to grant them with PR status, we simply leave them to rot, here in Malaysia! The 6P program which ended on July 31, 2012 wasatotal failure.
The company NERS which was appointed by the government to supply all the 'latest gadgets' for the program was treated asaking for the business. Deputy PM Muhyiddin (whether he admits 6P isafailure or not) should takealook again at the system because it containsalot of flaws.
Even most of the 6P data collected during the 'over zealous' implementation period didnt find its way to the Immigration Dept and that causealot of problems, not only to foreign workers who took part in the exercise but also to employers and the government agencies.
The failure of the 6P has also opened the floodgate to graft and cheat. Some irresponsible people and companies took advantage of it by introducing their own set of solution to collect money illegally from the foreign workers.
Graft gets rampant when enforcement officers from the Immigration Office and the police prey on those nabbed at random or during special operation. In many cases, they will free most of those caught once the right free is paid. So, it is not wrong whenapolitician said recently that graft at the Immigration Dept is from 'head to toe'.
And where do we go from here? Nowhere!
Hisham and his friends will not admit failure in what they had implemented. I think it is not the government policy to admit mistake even though many things went disarray. To them, onceapolicy is announced and implemented, there wont be any error.
That explains why the Home Ministry refused to listen to others, especially from the market players. The ministry officials will not make way for any fresh and better proposal put forward by the public to help reshape the 6P program, let alone open their door to discussion.
So, welcome to our friends from Bangladesh. Let's see what will happen to them once their contract ends but the usual case is, they come to stay!
Posted: 25 Nov 2012 07:12 AM PST
I have moved. To http://www.wahidayaakub.com.
Posted: 25 Nov 2012 06:17 AM PST
Chinese Burmese businessman Win Lei Yi wistfully acknowledged that he had 'heard the same thing myself' about how many Burmese were unhappy aboutahuge influx of Chinese into this city in central Myanmar. The Chinese, and the money and trade opportunities that they bring with them, poseastiff challenge to U.S. President Barack Obama, who was in Myanmar on Monday. Obama is trying to re-orient U.S. foreign policy from Europe and the Middle East to Asia to compete with China. Photograph by: Matthew Fisher/Postmedia News , Postmedia News. MANDALAY, Myanmar — A Chinese trader beataBurmese boy in Mandalay's jade market last week, thinking the youth had stolen about $574 Cdn from him. The Chinese visitor had to be rescued fromahostile Burmese mob.
Everyone in this city of one million made famous in the West by Rudyard Kipling's epic poem, Mandalay, was still talking about the incident days after it happened. The incident and protests elsewhere in Myanmar over pollution fromacopper mine that exports to China have underlined simmering tensions between the local population, including Chinese Burmese who have been here for more thanacentury, and tens of thousands of relatively well-heeled newcomers who have crossed the porous 2,185-kilometre-long border with China.
Many of them are settling in Mandalay, where both Burmese and Chinese estimate that about one-third of the city's population may be Chinese. Almost all of the newcomers from China have arrived over the past three or four years.
"So many Chinese have come some local people joke that Mandalay is part of China now," said Tun Tun,abusinessman who buys and sells rice, peas, nuts and sesame seeds. "The Chinese are already the majority in the centre of town."
The main reason given by the White House for U.S. President Barack Obama's unprecedented visit to Myanmar this week was to spur even greater democratic reforms than those that began about two years ago.
While welcoming Obama's push for greater political freedom in this stunningly beautiful, achingly poor country, many Burmese reckon that the president hadasecond motive. They believe Obama is suddenly interested in Myanmar because as part of his now famous pivot to Asia, the United States seeks to counter China's influence here.
As the CIA Factbook's chapter on Myanmar, also known as Burma, states, the country is of strategic importance because it hasalong coastline that looks out on important Indian
China has rocky relations with almost every Asian country right now except Cambodia, North Korea and Myanmar. Despite Beijing's enormous economic clout in the region, there are still opportunities that the U.S. and its allies can and must exploit in Myanmar and everywhere else in Asia because of the local preference for the faraway West rather than the emerging colossus looming next door.
But the U.S. and its allies, including Canada, which will open an embassy in Myanmar next June, havealot of ground to make up.
China already imports natural gas, copper, teak, gem stones and agricultural products from Myanmar, which is thought to still have vast quantities of other largely unexploited natural resources. Some Chinese are buying farmland for sugar cane and other crops. Chinese companies are acquiring land in and near Mandalay to set up factories.
"(The Chinese from China) aren't allowed to do this in their name, so they buy in the name ofaBurmese person," said Win Lei Yi,aBurmese Chinese whose jewelry shop now does 80 per cent of its business with Chinese.
The resentment of the Chinese newcomers, who only need five hours to drive from the border to reach Mandalay, partly arises because they have lots of money inacountry that does not have any. It is also fed by their reputation for being so hard-headed in business negotiations that they leave little or no profit for locals. There are also dark rumours that some Chinese are involved in the drug
Whether such allegations are true or not, it is perceptions that matter the most in such situations and these ugly stories are widely believed in Mandalay. It prompts many Burmese to openly state their dislike for the Chinese.
"I've heard the same thing myself," Win Lei Yi said wistfully. He acknowledged that many Burmese would rather that there were far fewer Chinese immigrants.
The influx had created an awkward situation where, to paraphraseaBurmese saying, "Even if you don't love someone, you sometimes have to pretend to kiss them."
Thu Sui Hnin,aBurmese Chinese who runsafurniture shop with her Burmese husband, acknowledged that relations with the Chinese from China were difficult.
"I understand such feelings because the Chinese are often not fair in how they do business," she said. "We welcome President Obama and the U.S. What we want is to be friends with both sides."
Tun Tun, the Burmese agriculture trader, said there were doubts about whether the U.S. and its allies were sincere about their grand plans for Asia. He set the West this challenge.
"Everyone prefers your culture and your products because they are of much higher quality than those from China," he said. "But we can afford their products. We can't afford yours. I do business with the Chinese because I have no other choice. Nobody else is buying. We need other options."
Original source article: In Myanmar, tensions simmer between locals and Chinese newcomersTranslations into Burmese here>>>
Posted: 25 Nov 2012 06:06 AM PST
M-Media နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၂
တာချီလိတ်မြို့တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတစ်ဦးထံမှ လက်နက်များဖမ်းဆီး ရမိ ခဲ့သော် လည်း ထိုလက်နက်များသည် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်၏ တာချီလိတ်သို့ အလည်လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သတ် ဆက်နွယ်ခြင်းလုံးဝ မရှိကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ နယ်စပ်၏ တာဝန်ခံ စီနီယာရဲအရာရှိ တစ်ဦး က ပြော ကြား လိုက်ကြောင်း မြန်မာတိုင်းမ်စ်က သတင်းဖော်ပြသည်။
တာချီလိတ်တွင် လူတစ်ဦးအား လက်နက်များနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသည့် သတင်း ထွက်ပေါ်လာအပြီးတွင် သက်ဆင်ကလည်း သူ၏ တာချီလိတ်ခရီး စဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ သည်။ သက်ဆင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိကမူ ထိုသို့ အလည်အပတ် ခရီးစဉ် ဖျက်သိမ်းရခြင်းမှာ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေနိုင် သည့် ကောလဟလ များကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
သက်ဆင်ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းခဲ့၍ တာချီလိတ်သို့ လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည့် သက်ဆင်အားထောက်ခံသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသားတို့အတွက် စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ် ခဲ့သည်။ သက်ဆင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ မစ္စတာပတ္တမာက အောက်တိုဘာ ၂၁ တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်း သား တစ်ဦး ကို လောင်ချာတစ်လက်၊ အမ်-၁၆ စက်သေ နတ်တစ် လက်တို့ကို လောင်ချာ ပစ်ကျည် များနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုရှမ်းအမျိုး သား မှာ လက်နက်များကို ထိုင်းနိုင်ငံ မှနေ၍ မြန်မာပြည်တွင်း သို့ တရားမ၀င် မှောင်ခိုသယ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ထိုသတင်းကြောင့် သက်ဆင်အား လုပ်ကြံဖို့ အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု ယူဆ ရကြောင်း ပြောကြားသည်။
သို့သော် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး တပ်ဖွဲ့မှ ဗိုလ်အောင်ကျော်စိုးကမူ သူ့အနေဖြင့် ထိုလက်နက်များသည် သက်ဆင်နှင့် တစ်စုံတစ်ရာဆက်နွယ်နေ သည်ကို မယုံကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုတပ်ဖွဲ့မှ ၂၀၁၁ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ တရားမ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါးသယ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားသည့်အမှုပေါင်း ၅၆ မှုကို ကိုင်တွင်ဖြေရှင်းခဲ့ရပြီး ၂၀၁၂ တွင်မူ လက်ရှိအချိန်ထိ အမှုပေါင်း ၈၄ ခုထိ ဖြေရှင်းခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လာမည့်နှစ်ကုန်တွင် နယ်စပ် ရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုများမှာ ယမန်နှစ်ကထက် တ၀က်တိတိတိုးမြင့်လာဖို့ရှိကြောင်း မြန်မာတိုင်းမ်စ်က ဆိုသည်။
ဗိုလ်အောင်ကျော်စိုးကမူ ၄င်းတို့အနေဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါးကို ထိုင်းနိုင်ငံထဲသို့ ပို့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှလက်နက်များ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ သွင်းယူနေ သည့် အမှုများကို (အချို့သော ကိစ္စကြီးများတွင် ထိုင်းရဲများက ကူညီကြသော်လည်း) ထိန်းချုပ်ဖို့ အင်အား မလုံလောက် သေး ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
တာချီလိတ်မြို့ခံတစ်ဦးကမူ မြို့တွင်းတွင် လူအများက သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ လက်နက်ဝယ်ယူရန် မူးယစ်ဆေးဝါးများ တရားမ၀င်ကူး သန်းရောင်း ၀ယ်နေကြသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသူကို မြန်မာတိုင်းမ်စ်က ထိုလက်နက်များ မည်သည့်နေရာမှ ၀ယ်ယူရရှိနေကြသလဲဟုမေးမြန်း ခဲ့ရာ ထိုသူက ထိုင်းနယ်စပ်မှဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင် အဖြေပေးခဲ့သည်။
ကုလ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇ၀တ်မှု၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာအရ မြန်မာပြည်တွင် (အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင်) မူးယစ်ဆေးဝါး စိုက်ပျိုးမှုပေါင်း ၁၆ စီအထိ မြင့်တက်လာကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အများစုမှာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းတို့မှ ထွက်ရှိနေကြောင်း၊ ထိုမူးယစ်ဆေးဝါးများကို ထိုင်း၊ တရုတ်နှင့် အင်ဒိုတို့သို့ တင်ပို့နေကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မှ နိုင်ငံရေးသမား ဦးခွန်ထွန်းဦးကမူ ယင်းသို့ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာဖြစ်ပျက်နေရခြင်းမှာ မြန်မာအစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင်သမားများ အကြား ခက်ထန်တင်းမာ မှုများကြောင့်ဖြစ် သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တစ်ခုထဲ၌ ဘိန်းစိုက်ပျိုးခင်းပေါင်း ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းထိ မြင့်တက်လာကြောင်း ကုလသမဂ္ဂမှ တရားဝင်ပြောကြားလိုက်သည်ဟု လော့အိန်ဂျလိစ်တိုင်းမ် သတင်းမှလည်း သိရှိရသည်။
မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့မှ ရွှေတြိဂံဒေသအနီးရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် ၂၀၁၁ ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးရ ရှိပြီးဖြစ်သော် လည်း ဂယ်ရီလီဝစ်ကမူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းပဋိပက္ခများမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့် ခိုင်မာစွာဆက်နွယ်ပတ်သတ်နေကြောင်း၊ ၄င်းဒေသတွင်း မပြေလည်မှုများ ဆီမှ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ကို အသုံးချကာ လက်နက်ခဲယမ်းများဝယ်ယူနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု စင်ကာပူ တူဒေးသတင်း က ရေးသားထားပြန်သည်။
သို့သော် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလှသည်မှာ မြန်မာအစိုးရနှင့် ရှမ်းနယ်စပ်ဒေသလက်နက်ကိုင် ခွဲထွက်ရေးသမားများအကြား ဆက်ဆံရေး ခက်ထန်တင်းမာ သည့်အကြောင်းကို သာမက လက်နက်ကိုင် ခွဲထွက်ရေးသမားတို့၏ နိုင်ငံသိက္ခာ ကျအောင် မူးယစ်ဆေးဝါးအမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်နေမှုအကြောင်း များ ကို မြန်မာပြည်ရှိ ခေါင်းဆောင်မီဒီယာကြီး များမှ ကြောက်စရာကောင်း လှသည့် ကိစ္စရပ်အဖြစ် ယူဆခြင်းမရှိသလို သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းလည်း မရှိကြပေ။
Posted: 25 Nov 2012 06:02 AM PST
အို-ဘားမားနဲ့ ဒေါက်တာအေးမွန်တို့ ပါဝင်သော တတိယလှိုင်း တစ်ခန်းရပ် ပြဇာတ် သရော်စာ, ထွေရာလေးပါး နိုဝင်ဘာ ၂၄ ၊၂၀၁၂ M-Media မောင်သမာဓိ
DNRP ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမွန် ရုံးခန်းတွင် ဖုန်းသံမြည်လာ၏။ တီတီတီ…..
Dr. AM ။ ။ ဟဲလို…
Secretary ။ ။ ဟိုင်း…. အိမ်ဖြူတော် အတွင်းရေးမှူး စကားပြောနေပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ အို-ဘားမားက DNRP ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ အေးမွန် နဲ့ စကားပြောချင်လို့ပါရှင့်။
Dr. AM ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒေါက်တာအေးမွန် ပြောနေပါတယ်။
Secretary ။ ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းကိုင်ထားပါရှင်။ သမ္မတကြီး စကားပြောပါတော့မယ်။
O-burma ။ ။ မင်္ဂံလာပါ ဒေါက်တာအေးမွန်။ ကျွန်တော် သမ္မတ အို-ဘားမားပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်မှာ တတိယအကြိမ် လူမျိုးရေးအထိကရုံးထပ်ဖြစ်ရင် ကျွန်တော့်မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဒေါက်တာအေးမွန်က ပြောတဲ့အကြောင်း VOA အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကြားလိုက်လို့ပါ။
Dr. AM ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာ သမ္မတကြီး အို-ဘားမား မိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာ ရခိုင်ပြည်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ရိုဟင်ဂျာလို့ သုံးနှုံးခေါ်ဆို ခဲ့တဲ့ အတွက် ဘင်္ဂါံလီများကို မြှောက်ပေးသလိုဖြစ်တဲ့အပြင် ယ္ခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု တွေကလည်း ရိုဟင်ဂျာ အသုံးအနှုံးကို ရခိုင်ဒေသခံများက မကြိုက်တာကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိထားလို့ပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ရိုဟင်ဂျာ Ethnic Rights တောင်း မှာစိုးလို့ပါ။
ဒီနေ့ဘဲ ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ကရက် (စမ်းချောင်း) က ဒီကိစ္စကို ကန့်ကွက်ကြောင်း အိပ်ဖွင့်ပေးစာ မစ္စတာ အို-ဘားမားထံ ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
O-burma ။ ။ ၂၃ နိုဝင်္ဘာံလ ၂၀၁၂ ရက်စွဲနဲ့ ကျနော့်ထံ ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ကရက်က ပေးပို့ ထားတဲ့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာ အင်္ဂံလိပ် မှတ်တမ်း (Record) တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကို မတွေ့ ရဘူးလို့ ရေးထားတာကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးမှ ပေးတဲ့ အမည်ဖြစ်လို့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှ ထုတ်ဝေတဲ့ စွယ်စုံ ကျမ်းနဲ့ မြန်မာ့အသံ နှစ် ၃၀ ခရီး စာအုပ်တွေမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ကို ရေးထားတာ တွေ့ရတယ်လို့ ရန်ကုန်သံရုံးက မှတ်ချက်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော့်နာမည် အိုဘားမားကို ကျနော့် အမေကပေးခဲ့ပါတယ်။ အေးမွန်ဆိုတဲ့ အမည်ကို ခင်ဗျား မိဘများက မှည့်ပေးခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ DNRP ဆိုတဲ့ ပါတီအမည်ကို အဲ့ဒီပါတီဝင် တွေကသာ ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုံးက မူဂျာဟေဒင် ခေါ်တဲ့လူမျိုးစု တစ်ခုဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်က စစ်တွေမြို့ အလယ်သံကျော် ကျေးရွာမှာ Conference တစ်ခု ကျင်းပပြီး သူတို့လူမျိုးစု အမည်ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် အမည်ပေးခဲ့တာကို ကျနော်သိထားလို့ သူတို့ကြိုက်တဲ့ အမည်ကို ခေါ်လိုက်တာပါ။
Dr. AM ။ ။ ကောင်းပြီ။ ဒါဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်မှာ လုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အမည်ကို ဘာဖြစ်လို့ Myanmar လို့မခေါ်ဘဲ Burma လို့ ခေါ်ရတာလဲ။
O-burma ။ ။ ကျနော်လေးစားရတဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း Burma လို့ဘဲခေါ်တယ်လေ။ နောက်တစ်ချက်က ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံရဲ့ အမည်ကိုရွေးကောက်ခြင်းမခံရတဲ့ အာဏာသိမ်း လူတစ်စုက ပြည်သူအများစုရဲ့ Consensus မပါဘဲ( အင်္ဂံလိပ်လို) Myanmar လို့ ပြောင်းထားတာ ဖြစ်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပါလီမန်ခေတ်ကပင် ရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာလိုအမည်ကိုတော့ Burmese language နဲ့ကျနော်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားမုန်းတဲ့ လူမျိုးစုအမည်ကို သူတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အတိုင်း ရိုဟင်ဂျာ လို့ခေါ်ရုံနဲ့ တတိယအကြိမ် လူမျိုးရေးအထိကရုံး ထပ်ဖြစ် မယ်တော့မထင်ပါဘူး။
Dr. AM ။ ။ အမေရိကန် သမ္မတ ကိုယ်တိုင် အတိတ်ကာလက မဲပေးခွင့် မရှိတဲ့ မိသားစုက ဆင်းသက် လာတာပါလို့ ပြောလိုက်တဲ့အချက်က နောင်တချိန်ကျရင် ရိုဟင်ဂျာတွေမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် ရှိရမယ်လို့ တောင်းဆိုပေးသလိုဖြစ်လို့ ရိုဟင်ဂျာတွေ လူ့အခွင့်အရေး လောဘတက်ပြီး တတိယလှိုင်းဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
O-burma ။ ။ ခင်ဗျားပြောတာက ခန့်မှန်းတာနဲ့မတူဘူး။ တတိယလှိုင်းကို ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ဦး ဆောင်မှာဖြစ်လို့ ကြိမ်းသေဖြစ်လာမဲ့ပုံပေါက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အတိုင်းလဲ ဖြစ်လာမယ်၊ သမ္မတ သိမ်းစိန်ကလည်း ဒီတတိယလှိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော် အို-ဘားမားမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ တရားဝင်ကြေငြာရင် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့၊.
Don't worry! အမိမြေလုံခြုံရေးတပ်တွေ လွှတ်ပေးပါ့မယ်။ လူမျိုးစုနှစ်ခုစလုံးရဲ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေကို အကာအကွယ်ပေးမဲ့အပြင်၊ ဒေသတွင်း ပြန်လည် ထူထောင် ရေး လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း လုပ်ပေးမယ်။ အကြမ်းဖက်သူတွေနဲ့ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင် ဖန် တီး နေသူတွေကိုပါ မိအောင်ဖမ်းပေးပါ့မယ်။ ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုရမှ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်း ရေး တပ်တွေနဲ့ အစားထိုးပြီး ကျနော့်တပ်တွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပါ့မယ်။ တရားခံတွေ စာရင်း ထဲမှာ ခင်ဗျားမပါ ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Dr. AM ။ ။ ဒါ…ဒါ…ဒါ… တော့မဖြစ်နိင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားတပ်တွေလက်ခံလို့မရဘူး။ တရုပ်တပ်တွေ ကပါ ကချင်ပြည်နယ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဝင်ထိန်းမယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ငါးပါးမှောက်ပြီ။
O-burma ။ ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ အိမ်နီးနားချင်း နိုင်ငံဖြစ်တဲ့၊ တစ်ချို့တွေက နေပြည်တော်အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ခင်ဗျားမိဘများရဲ့ မူရင်းနိုင်ငံလို့ စွပ်စွဲထားတဲ့ ဘင်္ဂံလားဒေ့ရ်ှမှာ မရှေးမနှောင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးအထိကရုံးကို စစ်သားလူထွက် မဟုတ်တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနားဟာ အမျိုး သမီးဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်နိုင်တာကို တွေ့ရတယ်။ ဒုတိယ၊ တတိယ လှိုင်း တွေ ဖြစ်တာလည်း မတွေ့ရဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒုက္ခသည်တွေကို ရှိတ်ဟာစီနာပြောတဲ့ မိန့်ခွန်း ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံပိုင် သတင်းစာနဲ့ မီဒီယာတွေမှာ ဖေါ်ပြတာမတွေ့ရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။
Dr. AM ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန် နိုင်ငံ လော့စ်အိမ်ဂျယ်လိစ်မှာ ပြောခဲ့ဘူးသလို ပြောရရင် This question is purely hypothetical. Let it be practical. လက်တွေ့ကျကျ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိမ်းစိန်ကို ရန်ကုန်မှာ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်မေးခဲ့ရမဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
O-burma ။ ။ ထားပါတော့လေ။ မဖြစ်သေးတဲ့ ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာ အထိကရုံး တတိယလှိုင်းက ကျနော် အို-ဘားမားရဲ့တာဝန်ဆိုရင် ဖြစ်ပြီးတဲ့ တောင်ကုတ်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လူ ၁၀ ဦး အကြမ်း ဖက်လူအုပ်စု တစ်ခုရဲ့အသတ်ခံရမှု အပြင် ပထမနဲ့ ဒုတိယလှိုင်းတွေအတွက် ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိပါ သလဲ။
Dr. AM ။ ။ ခင်ဗျားလူမှားပြီးမေးနေ ပြန်ပြီ။ တကယ်တော့ ဒီမေးခွန်းကလည်း သမ္မတ ဦးသိမ်းစိန်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကို မေးမှ လက်တွေ့ကျပါမယ်။
O-burma ။ ။ တကယ်တန်းပြောရမယ်ဆိုရင် ဟီလာရီ ကလင်တန် ပထမတစ်ခေါက် ရန်ကုန်ကို သွားစဉ်ကပင် ဒီပဋ္ဋိပက္ခတွေ မကြာမီဖြစ်လာတော့မဲ့ (Red Flag sign) လက္ခဏာတွေ တွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဒေါ်စောခင်တင့် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ဟီလာရီကလင်တန်ထံ ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာ ရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ များကိုသာ မက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ နေထိုင်တဲ့ မွတ်ဆလင်များကို အဆိုးမြင်ပြီး၊ ရခိုင်ကို ပါလက်စတိုင်း ဒေသနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရေးသားထားတာကိုလည်း ဖတ်ရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကစလို့ ရခိုင်နဲ့ ဘင်္ဂံလာရီ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းကို လေ့လာထား ပါတယ်။ ဒီ့အပြင် ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် သံရုံးကပေးပို့တဲ့သတင်းအရ သမ္မတ သိမ်းစိန်က ခင်ဗျားတို့ ရခိုင်ပါတီ နှစ်ခုကို နှစ်ကြိမ်တိတိ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး၊ မေတ္တာရပ်ခံသလိုနဲ့ သတိပေး ခဲ့တယ်။ သမ္မတ သိမ်းစ်ိန် လွှတ်တော်ကို ပေးပို့တဲ့ သဝဏ်လွှာမှာ ကွန်ပြူတာမှားပြီး ပါလာ တယ်ဆိုတဲ့ ပူးတွဲပါသတင်းဖြစ်စဉ်မှာလည်း ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေနဲ့ နောက်ကွယ်က ပါတီ တွေကိုဘဲ တာဝန်မကင်းကြောင်း ဖေါ်ပြထားတယ်မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ နောက်ကွယ်က အို-ဘားမားနဲ့ CIA ပါတယ်လို့ ဗမာအစိုးရ အစဉ်အဆက် ထုံးစံအတိုင်း မပြောလို့ ကျနော်ကတော့ စိတ်အေးရပါတယ်။
Dr. AM ။ ။ ရခိုင်ပါတီတွေကို ခေါ်တွေ့တာက ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အောင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတာသာဖြစ်ပါတယ်။ အခုကျင်းပနေတဲ့လွှတ်တော်မှာ ပထမ မှားတင်တဲ့ ပူးတွဲပါ သတင်းဖြစ်စဉ်ကို ရုပ်သိမ်းပြီး အသစ်တစ်ခုနဲ့ အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။
O-burma ။ ။ ကျနော့်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချဲကို ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လွှတ်ပြီး လေ့လာ ခိုင်းထားပါတယ်။ သူပြောတာက ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လုံခြုံရေး၊ တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေမှာ တော်တော်အားနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိလို့လား။
ကျနော်ကတော့ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်းမှာ ဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေမပါတဲ့ အတွက် Power Balance မဖြစ်ဘဲ တဖက်သတ် စောင်းနေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ ထောက်ခံအတည်ပြုထားတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အပိုဒ်၂၁ မှာ လူတိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေး၌ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်လိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ် များမှ တဆင့်ဖြစ်စေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိသည်လို့ ပါတယ်မဟုတ်လား။
Dr. AM ။ ။ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်သမိုင်းအရ ဒေသခံမဟုတ်တဲ့အပြင် နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့ ကျူးကျော် အခြေချ နေထိုင်သူတွေကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှာ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
O-burma ။ ။ နယ်စပ်ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဌေးက ရခိုင်ပဋ္ဋိပက္ခဟာ လူမျိုးဆွဲ၊ အယူဝါဒစွဲ နဲ့ သမိုင်း အစွဲ တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဝေါဟာရ အသစ်နဲ့ နောက်ဆုံး သုံးသပ်ထားတော့ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ လုံလောက်တဲ့၊ ခိုင်လုံတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိသွားပုံရတယ်။
သမ္မရုံး ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းကလည်း ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ နာမည်ကိုသာ လက်မခံနိုင်ပေမဲ့ လူတွေကတော့ လွတ်လပ်ရေးမရခင် ကတည်းက လာရောက် အခြေချ နေထိုင်သူတွေ ဖြစ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသလိုဘဲ တတိယနိုင်ငံကို ဥပဒေမဲ့ ပို့လို့ မရဘူးလို့ အမေရိကန် မြေပေါ်မှာ အဲဒီနှစ်ယောက်စလုံးက ပြောသွားသေးတယ် မဟုတ်လား။ ဒီလိုဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာ တွေကို လူမျိုးအမည် နေရာမှာ ကွက်လပ်ထားပြီး နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုပေးလို့ မရနိုင်ဘူးလား။
Dr. AM ။ ။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို Refugee Camp မှာ ထားပြီး တတိယ နိုင်ငံကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့ စကားကို သမ္မတ ဦးသိမ်းစိန်က စပြီးပြောခဲ့တာပါ။
တတိယနိုင်ငံကို ပို့လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုကာမှ ရိုဟင်ဂျာတွေက တစ်စခန်း ထနေ ကြတယ်။ သူတို့ကိုထုတ်ပေးမဲ့ နိုင်ငံသားကဒ်မှာ လူမျိုးအမည်ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ အသိအမှတ် ပြုမှ လဝကထံ စားရင်းသွင်းမယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒုက္ခသည် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး တတိယ နိုင်ငံတစ်ခုခုကို မရောက်၊ ရောက်အောင် ဆက်ဆက် ပို့ပေးပါလို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်လေ။ အထူးသဖြင့် ပိုပြီးလွတ်လပ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပေါ့။
O-burma ။ ။ ဟား… ဟား…ဟား (အိုဘားမားရယ်သံ)။ တတိယနိုင်ငံကို သွားဖို့ ကုန်ကျ စားရိတ် က လူတစ်ဦးအတွက် မြန်မာငွေ ကျပ် သိန်း ၂၀ လောက်ရှိတယ်လို့ ကျနော်သိထားပါတယ်။ DV lottery နဲ့ မြန်မာအယောက် ၃၀၀ လောက်နှစ်စဉ် ဗီဇာထုတ်ပေးနေပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သူတို့တွေဟာ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ လာရောက် အခြေချနေထိုင်သူများသာ ဖြစ်ပြီး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နယ်မြေတွေကို ခင်ဗျားတို့ စွပ်စွဲသလို ကျူးကျော် သိမ်းပိုက် လိုသူများ မဟုတ်တာ တော့ကြိမ်းသေတာပေါ့။
ဒီ့အပြင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် တတိယလှိုင်းကို ကာကွယ်ပြီးလည်း ဖြစ်သွားမယ်။ မကောင်း ဘူးလား။ All inclusive ပေါ့။ တစ်ခြားရော ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ဘို့ စဉ်းစားထားလဲ။
Dr. AM ။ ။ ဘာတွေလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ။ မစ္စတာ အိုဘားမား အနေနဲ့ အကြံပြုကြည့်ပါဦး။
O-burma ။ ။ Good question! ကျနော် အကြိုက်ဆုံး မေးခွန်းကို မေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ မဟုတ်ပေမဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ဖြေပါ့မယ်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့် အလုပ်က ပြည်သူလူထု လုံခြုံရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘဲ ဖြစ်တယ်။ နှစ်ဖက်ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်နဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို အမှန်တကယ် အကာအကွယ်ပေးပြီး လူထုရဲ့ အစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမယ်။
ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးက ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ထိထိ ရောက်ရောက်လုပ်ပေးဖို့နဲ့ လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ရေ၊ အစားအစာ၊ အဝတ် အစားနဲ့ ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေအပြင် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ဘို့ ယာယီအဆောက်အအုံ၊ ယင်လုံအိမ်သာနဲ့ စောင်တို့ အနွေး ထည်တို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရိက္ခာပစ္စည်းတွေဖြန့်ဖြူးရာမှာ ဝင်ရောက် ဟန့်တား လုယူနေတဲ့ အစွန်းရောက်တွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးမှ ပြည်သူ လူထုရဲ့ ယုံကြည်မှု (Trust) ကိုရမယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံး အချက်ဖြစ်တယ်။
တတိယ အရေးအကြီးဆုံးက ဥပဒေကျူးလွန်သူအားလုံးကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အရေး ယူဖို့ လိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသလို ဥပဒေစိုးမိုးမှ ခင်ဗျားစိုးရိမ်တဲ့ တတိယလှိုင်းကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်။
စတုတ္ထ ဦးစားပေးရမှာက ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် လုပ်ဖို့လိုတယ်။ တကယ်တော့ အဆောက်အအုံတွေ၊ ဈေးတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်း အရင်းအနှီးတွေ မီးလောင် ပျက်စီးကုန်တယ် ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့ Asset တွေပြိုကွဲတာဖြစ်လို့ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲသွားတာ ဘဲဖြစ်တယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ အရင်းအနှီး များများလိုမှာဖြစ်လို့ OIC လို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်း တွေရဲ့ အကူအညီတွေကို လက်ခံသင့်ပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ သူတို့အိမ်တွေကို ပြန်ဆောက်ပေးပြီးမှ နှစ်ဖက်စလုံးကို ရွှေပြည်အေး တရားဟောလို့ရမယ်။ မူလနေရာတွေမှာ ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်၊ ဈေးရောင်းခွင့် ပေးမှ သူတို့ရင်ထဲက အကြိတ်အခဲတွေလည်း ပြေပြောက် နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး (Interfaith) တွေလုပ်လို့ ရပါမယ်။
ပဉ္စမ အရေးကြီးတာက ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မပြုနိုင်အောင် အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာ ပြနိုင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုရပါမယ်။ ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံ က ပြဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး အတိုင်း အပြည့်အဝ ခံစားစေရပါမယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံကဲ့သို့ မတူညီတဲ့ ကွဲပြားမှုတွေ ကို စုစည်းပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားဖြစ်အောင် လုပ်ရပါမယ်။
ဆဌမ ဦးစားပေးလုပ်ရမှာက အုပ်ချုပ်သူုတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို လူ့အခွင့်အရေးတွေ နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပညာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခြေခံ ကျောင်းတွေမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်၊ အမျိုးသား ရေး လှုပ်ရှားမှုဆို တာတွေဟာလူ့အခွင့်အရေးစံတွေနဲ့ ဥပဒေ တွေကို ကျော်လွန်ပြုမူခွင့် မရှိ ကြောင်းကို ပညာပေး လေ့ကျင့် ပျိုးထောင် ပေးရပါမယ်။ အခြေခံ ကျောင်းတွေကိုလည်း အဓိက လူမျိုးစု နှစ်ခုစလုံးအတွက် လုံလုံလောက်လောက် ဖွင့်ပေး ရပါမယ်။
သတ္တမနဲ့နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး အလုပ် အကိုင်တွေ ပေါများအောင် ဖန်တီးထားဖို့ လိုပါမယ်။ လူမျိုးစုံနေထိုင်ပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းတဲ့ ဒေသတွေမှာစားဝတ်နေရေး အစဉ်မပြေရင် အစွန်းရောက်တွေရဲ့ စည်းရုံးရေးက အလွယ် တကူနဲ့ အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ဘဲမဟုတ်လား။
နိဂုံးချုပ် ကိုကျနော့် ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးများနဲ့ ပြောချင်တာက Change the diversity into strength of your country and go forward.
Dr. AM ။ ။ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
O-burma ။ ။ OK တကယ်လို့များ ရခိုင်ပြည်မှာ လူမျိုးရေး အထိကရုံးတတိယလှိုင်း ဖြစ်ဖို့ အလားအလာရှိရင် ကျနော့်ထံ သတင်းပို့ပေးပါ။ပူးပေါင်းတိုင်ပင် ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်ရင် နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် ဒေါက်တာအေးမွန်ကိုခေါ်တွေ့ဖို့ သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချဲကို တာဝန်ပေးထားလိုက်ပါမယ်။ Bye Bye.
Dr. AM ။ ။ Bye Bye. (ဖုန်းခွက်ကို ပုခက်ပေါ်တင်ပြီး နောက်သို့လှည့်ကာ သက်ပြင်း ချရင်းပြော)
တပည့်တို့ တတိယလှိုင်း စီမံကိန်းကို ဆက်မလုပ်နဲ့တော့။ မင်းတို့တွေလည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ အခြေအနေပေးတဲ့နေရာမှာ ရှောင်နေကြပါ။
ဝန်ခံချက်။ ။ ခေတ်ကာလ သရုပ်ဖေါ် တတိယလှိုင်း ပြဇာတ်ပါ ဇတ်ကောင်များ၏ ပြောကြား ချက်များသည် စာရေးဆရာ ၏ စိတ်ကူးများသာဖြစ်ပြီး နာမည်တူ၊ နေရာတူ၊ ဖြစ်စဉ်တူနှင့် နစ်နာမှုများရှိပါက ရိုးသားစွာ တိုက်ဆိုင်မှု ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး၊ တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
KUALA LUMPUR: Himpunan Hijau Anti Lynas mencapai matlamat apabila kumpulan pejalan kaki Stop Lynas berjaya tiba di Dataran Merdeka kira-kira jam lima petang tadi.
Hampir 20,000 orang berjaya tiba di hadapan Dataran Merdeka.
Mereka duduk di atas jalan raya mendengar ucapan Pengerusi Himpunan Hijau, Wong Tack.
Wong Tack dalam ucapannya berkata, kumpulan yang berjalan kaki dari Kuantan, Pahang akan duduk di Dataran Merdeka sehingga pagi esok bagi menunjukkan bantahan mereka.
"Kita berada di sini kerana sayangkan negara kita.
"Kita akan tidur di sini dan kita minta ahli parlimen datang jenguk kita kerana mereka menaiki kenderaan, cuma tiga minit sahaja sedangkan kita sudah jalan jauh," katanya.
Perjalanan sejauh 300 kilometer itu bermula sejak 13 November lalu.
Mereka tiba di Tol Gombak, jam3petang semalam sebelum berarak ke Kolej Universiti Islam Dr. Zulkifli Mohamed ((KUIZM), di Taman Melewar pada jam4petang.
Ketibaan mereka disambut PAS kawasan Batu dengan Yang DiPertua PAS Batu, Cikgu Ishak Surin yang turut bersama-sama berjlan kaki dari Tol Gombak ke Taman Melewar.
Pagi tadi, kumpulan tersebut bergabung dengan kumpulan dari Kuala Lumpur mula berarak dari KUISM ke Sentul Pasar.
Mereka seterusnya berarak ke Maju Junction sebelum bergabung dan berarak ke Dataran Merdeka.
Cikgu Ishak turut bersama-sama ke Dataran Merdeka bersama kaum Cina, Melayu dan India dari pelbagai peringkat umur.
Mereka duduk di Dataran Merdeka kira-kira sejam sebelum sebahagiannya beransur pulang.
Antara pimpinan Pakatan Rakyat yang turut serta ialah Presiden PKR, Datuk Wan Azizah Wan Ismail, Naib Presiden, Tian Chua dan Ahli Parlimen Kuantan, Fuziah Salleh.
Tiada kejadian yang tidak diingini sepanjang perarakan. -HD
Wan Azizah, ribuan aktivis Himpunan Hijau berarak ke Dataran
KUALA LUMPUR 25 November: Presiden KEADILAN, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail antara 20,000 aktivis himpunan Hijau yang berarak ke Dataran Merdeka bagi membantah operasi kilang Lynas di Gebeng, Kuantan.
Perarakan sejauh 42 kilometer itu bermula dari Markas Pas Taman Melewar di Gombak dan tiba di Dataran kira-kira jam 5.30 petang tadi.
Sebahagian peserta telah berjalan sejauh 300 kilometer dari Kuantan, sejak 13 November lalu.
Wan Azizah memulakan perjalanannya dari Maju Junction, sementara beberapa kumpulan lagi bergerak daripada beberapa lokasi sekitar laluan perarakan.
Mereka yang berpakaian dan bertopi hijau, dilihat turut mengibarkan bendera Jalur Gemilang dan melaungkan slogan "Hentikan Lynas" sepanjang perjalanan.
Peserta berkenaan antaranya melalui Lebuhraya DUKE, Kampung Railway dan Sentul Pasar, turut mendapat sokongan daripada pemandu kenderaan yang membunyikan hon.
Menurut ketua kumpulan itu, Wong Tack, mereka akan bermalam di Dataran Merdeka malam ini.
"Kita akan bermalam di sana dan menunggu matahari terbit esok," katanya di petik dari Malaysiakini.
Turut dilihat dalam perarakan itu ialah Ahli Parlimen Kuantan, Fuziah Salleh, Ahli Parlimen Lembah Pantai, Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Batu, Tian Chua dan pimpinan Pakatan Rakyat lain.
Sementara itu, Dataran Merdeka ditutup sejak pagi tadi atas alasan kerja-kerja menaik taraf kawasan berkenaan.
Media melaporkan, hampir 100 pegawai DBKL termasuk anggota polis dilihat mengawasi kawasan bersejarah dan tumpuan warganegara itu.
Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Ahmad Phesal Talib turut mengeluarkan notis larangan kepada orang awam berkumpul di lokasi tersebut. -KD
Gambar bawah ehsan telokbakong
Posted: 25 Nov 2012 05:50 AM PST
ရခိုင်ပြည် နယ်မှ ရာဇဝတ်မှုများ အမှု့မှန်ပေါ်ရေးအတွက် ပြည်သူတဦးမှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ သမ္မတထံပို့
"ရခိုင်ပြည် ကျောက်နီမော်နှင့် တောင်ကုတ်မြို့များတွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သော လူသတ်မှုများနှင့် ပက်သက်၍ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးပါရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်သို့ တင်ပြတောင်းဆိုခြင်း"
အမှတ် ၂၃၂-၈၃ လမ်း၊ ၂၇-၂၈ လမ်းကြား
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခု အောက်တိုဘာ (၂၇) ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာနှင့် တောင်ကုတ်မြို့များတွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သော လူသတ်မှုများကို အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး၊ တရားခံ အစစ် အမှန် ဖေါ်ထုတ်ရေးအတွက် အထူးခုံရုံး ဖွဲ့စည်း၍ နိုင်ငံတော်အဆင့် တရားသူကြီးများဖြင့် အများပြည်သူ ရှေ့မှောက်တွင် ထင်သာမြင်သာရှိစွာ ပြန်လည် စစ်ဆေးပေးပါရန်-
ရိုသေ လေးစားစွာ စာရေးတင်ပြ တောင်းဆိုပါသည်။
၁။ ကျွန်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ မိဘ ဘိုးဘွားမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြပြီး ကျွန်တော် ယခုနေထိုင်သောမြေနေရာတွင် မန္တလေးမြို့ စတင်တည်ထောင်စဉ်ကပင် နေထိုင်ခဲ့ပါသညါ။ ကျွန်တော်၏ ဘိုးဘေးများသည် မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် မင်းမငထမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ မူလ ဘိုးဘေးအဆက်အသွယ်များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် အင်းဝခေတ်ကတည်းက အင်းဝမြို့တောင်ဘီလူးရပ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ အင်းဝမြို့တောင်ဘလူး(တောင်ဘီလူး) ရပ်ကွက်တွင် ယနေ့အထိ ဗလီတွင်းဟု အရပ်ကခေါ်နေသည့် ရေတွင်းတစ်တွင်း ရှိပါသည်။ ထိုရေတွင်းနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် အင်းဝခေတ်က ကျွန်တော်တို့၏ ဘိုးဘေးများ ဝတ်ပြုခဲ့သည့် ရှေးဟောင်းဗလီ၏ အုတ်မြစ်အုတ်ရိုးများ ရှိနေပါသည်။ တောင်ဘလူရပ်မှ မြန်မာ့ရိုးရာ ယွန်းပညာရှင် ကိုဇော်မင်းထွန်း၏ အိမ်အနီးတွင် အင်းဝခေတ် တောင်ဘလူဗလီ၏ အုတ်ရိုးအစအန အကြွင်းအကျန်များ ယနေ့တိုင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ အင်းဝမြို့မြစ်သာရပ်တွင်လည်း ကျွန်တော်တို့၏ ရှေးဟောင်းမျိုးဆက်များ ယနေ့တိုင်နေထိုင်လျှက် ရှိကြပါသည်။ ဤသို့ ရှည်လျားစွာ တင်ပြနေရခြင်းမှာ ယခု သမ္မတကြီးထံ စာရေးနေသူသည် သမ္မတကြီး အုပ်ချုပ်နေသည့် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားစစ်စစ် တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိစေလို၍ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ သမ္မတကြီးထံ ယခုလို စာရေးသား တင်ပြရခြင်းမှာလည်း သာမန်ရေးရိုးရေးစဉ် လုပ်ငန်းသဘော ရေးနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယခု အသက်အရွယ်အထိ ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ အပါအ၀င် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင် အဆင့်ဆင့်ထံ စာရေးတင်ပြသည်ဟူ၍ မရှိခဲ့ဘူးပါ။ ထိုသို့ မရေးခဲ့ခြင်းမှာ ရေးစရာအကြောင်း မရှိ၍ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့် တစ်သက်တာကြုံတွေ့ခဲ့ရသော နိုင်ငံရေး၊လူမျိုးရေး၊ သာသနာရေး၊ အမျိုးသားရေး ကိစ္စများနှင့် ပက်သက်၍ နိုင်ငံတော်သို့ တင်ပြစရာ၊ အသိပေးစရာများ ကြုံခဲ့ ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်ရေးသည့်စာ အမှိုက်ခြင်းထဲ ရောက်မှာကို သိထားသောကြောင့် မရေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုသမ္မတကြီးမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ကမ္ဘာသိ ကြွေးကြော်ပြီး ကမ္ဘာကလက်ခံအောင်လည်း လုပ်ပြသော၊ ယခင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်သော သမ္မတကြီး ဖြစ်ပါသည်။
သမ္မတကြီး၏ အောင်မြင်မှုများအတွက် နိုင်ငံသားတစ်ယောက် အနေနှင့် ရင်ထဲ အသဲထဲက ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
သမ္မတ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည်အထိ ယခု အရှိန်အဟုန်အတိုင်း အောင်မြင်မှု သရဖူ ဆောင်းနိုင်ရန် မျှော်လင့် ဆုတောင်းမိပါသည်။
သမ္မတကြီးကို မိဘသဖွယ် သဘောထားပြီး အားကိုးတကြီး တင်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်ကိုလည်း လက်ခံစေချင်ပါသည်။
၃။ သမ္မတကြီးခင်ဗျား။ ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ် အီးဒ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်မ်များအတွက် တစ်နှစ်မှာ နှစ်ရက်ဘဲရှိတဲ့ တရားဝင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲရဲ့ ရက်တစ်ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မပျော်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နံတစ်လျားမှာ ရှိနေတဲ့ မွတ်စလင်မ်အားလုံးကို ဆိုလိုတာပါ။ နိုင်ငံတော်က အီးဒ်လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များက လုံခြုံရေးမရှိလို့ အီးဒ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ ကြေညာတယ်။ တကယ်လဲ အစ္စလာမ်ကို ဦးတည်ထိုးနှက်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို နေရာ အတော်များများမှာ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလို ထိလွယ်ရှလွယ် အနေအထားမှာ ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးက အီးဒ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ ကြေညာတာလဲ အပြစ်ပြောလို့ မရပါဘူး။
၃။ ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် ဒီအဖြစ်မျိုး ကြုံရတာလဲ။ ဒီကနေ့ မနက်မိုးလင်းကတည်းက ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ ဒီမေးခွန်းပဲ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာအပြစ်လုပ်မိသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှားနေသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်များ ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်မှုတွေ ကျူးလွန်မိလို့ ခုလို မလုံမခြုံဘ၀ကို ရောက်ရတာလဲ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ယခုအသက် ၅၀ ကျော်သည်အထိ ရာဇ၀တ်မှု တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ဖူးခြင်း မရှိဖူးပါ။ နိုင်ငံသားကောင်းပီသစွာ တစ်သက်တာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မိဘကအစ ဆွေမျိုးသားချင်း အများအပြားဟာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပြီး ရာဇ၀တ်မှု အမျိုးမျိုးနဲ့ ကင်းသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင် ကျွန်တော့်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာလည်း ဥပဒေလေးစား လိုက်နာသူများ၊ ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ် သမာအာဇီဝလုပ်ကိုင် စားသောက်သူများချည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးလည်း ဒီကနေ့ မပျော်နိုင်ကြပါဘူး။
၄။ ဒီကနေ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ဟာ ကျွန်တော် ယခုတင်ပြတဲ့ မသီတာထွေးအသတ်ခံရမှုကို အခြေခံပါတယ်။ မသီတာထွေး အသတ်ခံရတဲ့အတွက် တောင်ကုတ်မြို့မှာ အပြစ်မဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် နိုင်ငံသား (၁၀)ဦး အသတ်ခံရပါတယ်။ အဲဒီအပြစ်မဲ့နိုင်ငံသား (၁၀) ဦးဟာ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရပြီးနောက် မပြီးသေးဘဲ သူတို့အကြောင်း သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြရာမှာ "မူစလင်ကုလား" တွေလို့ ဒုတိယအကြိမ် ရက်ရက်စက်စက် အစော်ကား ခံကြရပါတယ်။ အပြစ်မဲ့ အသတ်ခံရသူတွေကို "မူစလင်ကုလား"တွေလို့ ရေးတာ သိပ်ရင့်သီးလွန်းပါတယ်လို့ တင်ပြတော့ "ပြည်တွင်းနေ မွတ်စလင်မ်များ" ဆိုပြီး ပြင်ပေးတယ်။ ပြည်တွင်းနေ မွတ်စလင်မ် ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က စဉ်းစားကြည့်ရင် "မူစလင်ကုလား" ဆိုတာထက် ပိုပြီး ဆိုးရွားပါတယ်။ အပြစ်မဲ့ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား (၁၀)ဦးဟာ "နိုင်ငံမဲ့တွေ" အဖြစ် ကြေညာခံရတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အဓိပ္ပါယ် ကောက်လို့ ရပါတယ်။ တတိယမြောက် ရက်စက်စော်ကားခံရတာပါ။
သူတို့က ဘာအပြစ်ကြောင့် အသတ်ခံရတာလဲဆိုရင် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်မိလို့ အသတ်ခံရတာပါလို့ ဖြေရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါတဲ့ ခရီးသည်တစ်ပြုံကြီးထဲက အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ သူတို့ (၁၀)ယောက်ကို အသေအချာရွေးချွယ်ပြီး ကမ်းကုန်အောင်ရက်စက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့သတ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ ပါဘဲ။ မြို့ ပေါ်မှာ လူစုလူဝေးနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီလူသတ်ပွဲကြီးအတွက် မျက်မြင်သက်သေ မရှိဘူးဆိုတာလဲ အတော်ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ပါဘဲ။ ကြိုတင်ကြံစည်တိုင်ပင်ထားလို့ (သို့မဟုတ်) ကြိုတင်နှုတ်ပိတ်ထားလို့ သာ ဒီလောက် ပိရိတာဖြစ်တယ်။
ဒီလိုလူဗိုလ်ပုံအလယ်မှာ အပြစ်မဲ့တဲ့လူ(၁၀)ယောက်၊ (၁၁)ယောက်ကို မျက်မြင်သက်သေမရှိအောင် သတ်နိုင်ခြင်းဟာ နောက်ပိုင်း ယနေ့ ထိ လူစုလူဝေးနဲ့အနိုင်ကျင့် လုယက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကို လက်ရဲဇက်ရဲဖြစ်အောင် မီးစိမ်းပြလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရင် ဘယ်သူမှငြင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအမှုရဲ့တရားခံအစစ်အမှန်တွေနဲ့နောက်ကွယ်က သွေးထိုးလှုံ့ ဆော်သူတွေကို တရားခွင် မတင်နိုင်မခြင်းလည်း ရခိုင်ပြည်ဟာ အေးချမ်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတိကျကျ ယုံကြည်လို့သမ္မတကြီးထံ တင်ပြတောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သတင်းခေတ်မှာ ရှေ့ ဆင့်နောက်ဆင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ ဒီအမှုနှစ်ခုဟာ ကမ္ဘာကို ဂယက်ရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ကမ္ဘာကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ရက်ပိုင်းမှာဘဲ မသီတာထွေးကို သတ်တဲ့ အဓိကတရားခံ ဆိုသူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားတယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ ဒီလို အဓိကတရားခံ သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်တဲ့ ပုံစံနဲ့သေဆုံးခြင်းအပေါ် ဥပဒေပညာရှင်တော်တော်များများ သံသယရှိကြပါတယ်။ ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ လူစုလူဝေးတွေရဲ့စွက်ဖက်နှောင့်ယှက်တဲ့ ကြားက ကြားနာစစ်ဆေးရတဲ့ တရားစီရင်ရေးဟာလဲ လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေး ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် များစွာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်လို့ဥပဒေကြောင်းအရ အချက်အလက်ကျအောင်တော့ တင်ပြနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပင်မဲ့ ကမ္ဘာက စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အမှုတစ်ခုရဲ့အဓိကတရားခံသေဆုံးတဲ့ ကိစ္စကို ဒီလောက်နဲ့ ပြည်ဖုံးကာချလိုက်တာတော့ ဥပဒေပညာရှင်များ သံသယ၀င်မယ်ဆိုလည်း ၀င်ထိုက်တယ်လို့ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။
၆။ သမ္မတကြီးမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ပြောင်းသွားလောက်အောင် အကျိုးဆက်ကြီးမားတဲ့ ဒီအမှုအခင်းနှစ်ခုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့လောက်တော့ သမ္မတကြီးအနေနဲ့အမိန့် ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ တရားစီရင်ရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တာမဟုတ်ဘဲ တရားစီရင်ရေးကို ၀င်ရောက် ထိန်းကျောင်း တည့်မတ်ပေးတာလို့ကျွန်တော် သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒီလိုအမှုနှစ်ခုကို နည်းလမ်းတကျ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ထင်သာမြင်သာရှိစွာ ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့အမိန့် ချတဲ့အတွက် သမ္မတကြီးမှာ နိုင်ငံရေးအရ ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိဘူးလို့ လဲ ကျွန်တော် ရိုးသားစွာ နားလည်မိပါတယ်။ ဒီလိုပြန်လည်စစ်ဆေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလုပ်ရပ်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အသေအလဲလိုအပ်နေတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခု အချိန်မီ ပေါ်ထွက်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်သွားမှာပါ။ ရိုးသားဖြူစင်သူဆိုတဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ကျော်ဇောလှတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို မှတ်ကျောက်တင် အတည်ပြု ပေးမဲ့ ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒါသာမက သမ္မတကြီးရဲ့တစ်သက်တာ စွမ်းဆောင်အောင်မြင်မှုတွေ ထဲမှာ သမိုင်းဝင်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုဖြစ်သွားမှာပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပစ္စက္ခသမိုင်းဟာ သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့  ရေးတဲ့သမိုင်းပါ။ ဒီသမိုင်းထဲမှ ရခိုင်ပြည်ရဲ့အခန်းကို ဖယ်ထားချန်လှပ်ထား ကျော်သွားလို့မရပါဘူး။
၇။ ဒီအမှုနှစ်ခုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့အတွက် ရရှိမဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကို ကျွန်တော်နေတဲ့ အကျယ်တ၀ံ့ရေးလိုလှပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အချိန်နာရီ မိနစ်တွေကို ထောက်ထားပြီး ဒီမျှဘဲ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၈။ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပါလျက် ကြိုးစားခြင်းမရှိဘဲ ဒီအမှုနှစ်ခုကို ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီအမှုများကို အကြောင်းပြုပြီး နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခများဟာလည်း ဆက်ပြီးဖြစ်နေအုံးမှာပဲ။ ရခိုင်ပြည်မှာ ဒီနေ့အထိ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေဆဲပါ။ လူသားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုပင် မထောက်ထားတော့ဘဲ အညှာတာကင်းစွာ လုယက်သတ်ဖြတ်မီးရှို့ နေဆဲပါ။ ဒီကသောင်းကနင်းဖြစ်ရပ်တွေထဲက မကြားမ၀ံ့မနာသာ သတင်းဆိုးတွေကိုလဲ နေ့ စဉ်ကြားနေရဆဲပါ။ ဒီသတင်းဆိုးတွေ ဘယ်အထိ မှန်တယ် မှားတယ် ကျွန်တော် မသုံးသပ်နိုင်ပါ။ သေချာတာကတော့ ဒီကနေ့ ဖြစ်နေသမျှ အားလုံးဟာ သံသယဖြစ်ဖွယ် စစ်ဆေးခံရတဲ့ လူသတ်မှုတစ်ခုကို အကြောင်းပြုနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်ပြင်ပမှ အခြားတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင် နေထိုင်လျှက်ရှိသော ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များသည်လည်း ရခိုင်ပြည် ကသောင်းကနင်းဖြစ်မှု၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားနေရပါတယ်။ ငလျင်ရဲ့ အဖျားအနား လှုပ်ခတ်မှုကို ကြည့်ရုံနဲ့ ငလျင်ရဲ့ ဗဟိုချက်မ ဘယ်လောက်ပြင်းထန်မယ်ဆိုတာ စာနာခံစားကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီကနေ့ ရခိုင်ပြည်က အပြစ်မဲ့ လူသားတွေဟာ သူတို့ မကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုရဲ့ နောက်တိုး တရားခံများအဖြစ် ပြစ်ဒဏ်ခံရလျှက် ရှိပါတယ်။
၉။ တပြိုင်နက်မှာဘဲ ဒီအမှုတွေကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီး လုံလောက်တဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေ မပြုမချင်း၊ တခြားတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်များမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များဟာလည်း သမ္မတကြီး ဦးဆောင် တည်ထောင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် လူ့ဘောင်ကြီးထဲမှာ အားကိုးရာမဲ့ မျက်နှာငယ်ရတဲ့ ဘ၀၊ လုံခြုံမှု မရှိတဲ့ ကျီးလန့်စာစားဘ၀၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ အနာဂတ် ပျောက်ဆုံးတဲ့ဘ၀များနဲ့ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ကြရဦးမှာဘဲ ဆိုတာကို ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အမှတ်(၂၃၂) ၈၃လမ်း၊ ၂၇x၂၈လမ်းကြား မန္တလေးမြို့ 
ခေတ္တ- အမှတ်(၁၀၃) ၊ ၅ရပ်ကွက် ၊ ရကက(၃)
Posted: 25 Nov 2012 05:25 AM PST
Reforms in Burma have revealedasectarian divide between Buddhists and ethnic Muslims whose villages are being destroyed in brutal clashes with echoes of similar clashes in the Balkans, parts of Africa and Northern Ireland.
The Muslim Rohingya minority are being targeted by Burmese Buddhists and driven from their villages in their thousands. Their plight was highlighted during his recent visit by the US President Barack Obama, but hopes that Burma's most prominent civil rights campaigner Aung San Suu Kyi may support their cause have so far proved fruitless.
Feargal Keane reports from Burma
Posted: 25 Nov 2012 05:03 AM PST
Whenagenocide is nota'genocide', Maung Zarni
A sattelite image of Pauk-taw Township, Arakan State, Western Burma, after the organized destruction: Source: Human Rights Watch
"( c ) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;"
The world is witnessing, and Burma's Rohingya are experiencing, the genocide, that cannot be called 'genocide'.
Too much strategic interests (of various external powers such as Washington, Beijing, London, Moscow, Paris, Jakarta, Delhi, Tokyo, etc.) stand in the way of framing the genocide of the Rohingya truthfully.
So, the world hears about 'sectarian violence', from the Human Rights Watch down to the hard-core — read amoral — realists in the corridors of power. It's not that this characterization of the situation in Western Burma is entirely untrue but that this framing glosses over the central, sustained (over3decades), and structural role of the successive Burmese military regimes and successive generations of generals in the genocide of the Rohingya.
Curiously for communal violence, the Rohingya have suffered the overwhelming devastation and the death toll, according to Reuters's Special Report on the violence against the Rohingya as well as the BBC.
Calling the ethnically motivated violence in Western Burma "sectarian" or "communal" – which implicitly assigns equal responsibilities as Aung San Suu Kyi of all people has done rather dishonestly and shamefully – is like comparing 1,000 Hamas rockets "raining down" on Israel with 1,000 plus Israeli raids against Gaza, or the "Palestinian Ghetto" – both ignore blatantly the most crucial element in both respective narratives:
genocidal structural contexts maintained by both States which were born out of conflicts, violence, and national delusions, internal Burmese imperialism towards ethnic minorities and Zionist racism, respectively.
Posted: 25 Nov 2012 04:59 AM PST
Colonel Richard Kemp: Special Interview: Former Commander of British Forces in Afghanistan VIDEO
"Jews are not promoting brainwashing children in military training camps, teaching them how to blow themselves up and cause maximum deaths of Jews and other non-Muslims. Jews don't hijack planes; they don't kill athletes at the Olympics; or blow themselves up in restaurants. There's notasingle Jew who has destroyedachurch; there's notasingle Jew who calls for the death of infidels. Perhaps the world should examine the respective values which exist in the Middle East. As Netanyahu said: 'If the Arabs put down their weapons today, there would be no more violence. If the Jews put down their weapons today, there would be no more Israel."
"Hamas considers all of Israel occupied, illegitimate,acancer,acrime against humanity Why was there an Israel–Gaza war in the first place? Resistance to the occupation, say Hamas and many in the international media. What occupation? Seven years ago, in front of the world, Israel pulled out of Gaza. It dismantled every settlement, withdrew every soldier, evacuated every Jew, leaving nothing and no one behind. Except for the greenhouses in which the settlers had grown fruit and flowers for export. These were left intact to help Gaza's economy — only to be trashed when the Palestinians took over."
Sarah Honig: Another Tack: A-Dawla ma'ana
Our successive confrontations with Gaza are an explicit acknowledgement that disengagement has failed, that we are not disengaged.
"When the blood-curdling battle cry exhorting the masses to slaughter the Jews, "Itbach al-Yahud," was first shouted on April 4, 1920, by Arab marauders rampaging through the Jewish Quarter of Jerusalem's Old City, it was accompanied by another mantra: "A-Dawla ma'ana" – the government is with us. That was the first brazen reverberation of the trust that Jews can be attacked with impunity, that no deterrence exists. It was since oft-chanted during the perpetration of other atrocities during the British Mandate era masterminded by Haj Amin el- Husseini, most notably the hideous Hebron massacre of 1929."
Posted: 25 Nov 2012 04:50 AM PST
Myanmar's Step-by-step Approach toward Rohingya Genocide and Ethni-cide
#1 Early anti-Rohingya policy
I would call the military's policy towards the Rohingya "structural genocide",asystematic and sustained act of policy maintained and pursued, irrespective of which general or ex-general is in charge. This includes various severe restrictions and other punitive acts in order to create living conditions as unattractive and unbearable as possible so that they would voluntarily exit Burma – and which thousands have done.
(after the Caretaker Government of General Ne Win took care of the restive Rakhine nationalists and their demand for autonomous Statehood in the 1950s. The Rohingya were useful asacounter-force towards the Rakhine nationalists in Arakan).
#2 Mass expulsion
"Naga Min" (meaning "conqueror of all Kulars") (or literally Dragon King) Expulsion Operation to expel the Rohingya (this operation was led by the man known as Ne Win's Butcher Brigadier General Sein Lwin,aconservative Buddhist monastery product born in an Upper Burma village and raised by the Burma Army, whose formal Buddhist education stopped at 4th Grade. Sein Lwin was also in charge of the bloody crackdown of 8.8.88 uprisings)
Bangladesh, emerging out of its civil war of East and West Pakistan as an independent nation, openly threatened Ne Win's regime by telling General Ne Win that Burma needed to take these Rohinga refugees back, or Bangladesh had ample stockpiles of arms to give away to the angry Rohingyas. That was when Ne Win and his deputies backed down and took 200,000 Rohingya refugees back).
General Ne Win was the country's best known racist, especially witharather virulent strain of anti-Muslim and Christian racisms. He was the only Burmese general who ordered mosques in Mandalay to stop any early morning prayers which are generally amplified through loud-speakers mounted atop mosques every time he stayed in the Northwest Command Military Headquarters inside Mandalay's walled city (the Palace). Ne Win embarked on the policy of cleansing of the Burma Army of any officer who was notaBuddhist. There was one or two exception. But asamatter of policy, Christian and Muslim officers were forced out of any position of importance early in their careers. Since Ne Win's time, the successive MILITARY regimes, including Thein Sein's, has been on autopilot with this cleanse-the-army-and-the-government of Christians and Muslims.
#3 Citizenship denial
Ne Win's regime stripped the Rohingyas citizenship and de-acknowledge the officially recognized "Rohingya", and re-wrote citizenship law in line with anti-Rohingya racism. This wasadirect response to the fact that they felt forced to take the Rohingya refugees back from Bangladesh.
Now the current verification process undertaken by the Border Affairs Minister under Than Shwe's pet Lt-General Thein Htay involves forcing through threats the Rohingya families in camps and other locations to write down their ethnic origin as "Bangali" and, in some cases, enticing them of the promise of full citizenship and other protections.
This is ETHNO-CIDE.
#4 Illegal Migration from Bangladesh
there were in-flow of Bangladeshi migrants into Western Burma. It would be untrue to say that there were no illegal immigration coming to Burma from Bangladesh. Before the situation in Arakan State worsened progressively some Bangladeshi attempted to enter Northern Arakan state via boats. According to veteran Burma naval officers, they wouldn't even bother arresting or sending these boat-loads of illegal Bangadeshi in Burmese waters. They simply blew entire boats up – no bodies, no traces, no need to waste man-power to arrest, house, feed and process them for deportation.
#5 Outsourcing ethnic cleansing and genocide to the local Rakhine
The recent waves of violence against the Rohingya which began in June was the opposite of the earliest post-independence policy which used the local Rohingya by recognizing them asanational ethnic group and administering them asaspecial group directly by the Head of the Rakhine State Security Forces (mostly Tatmadaw).
The Rakhine State Security Head was the late Colonel Kyaw Soe who later became Minister of Home Affairs in Ne Win's early Revolutionary Council Government and who was operationally responsible for blowing up Rangoon University Student Union.
The violence against the Rohingya and the rise in anti-Muslim racism were the direct outcome of the State's ethnic mobilization – in fact, directly through the facebook of Presidential Office Director and Government Spokesperson – you can't get any more Presidential than that!, all State broadcast and print media outlets, and the crony-owned private media outlets such as the Voice Weekly of Myanmar Egress and Eleven Day News Group.
#6 Acting contradictory and inconsistent asamatter of policy
There are elements that are not directly or even indirectly affiliated with Thein Sein government, who have been involved in the violence against the Rohingya. They are acting out of their own calculations, politically and ethically motivated. These cannot be construed as part of the regime's designs against the Rohingya.
What IS part of the regime's designs is they would give the troops different and often seemingly contradictory orders from the Central Command. Local Rakhine admin and authorities dare NOT act on anything without Naypyidaw's knowledge and command. So, what appears to be local acts are in fact greenlighted by Naypyidaw. Half-century of only taking orders from the highest authorities cannot be erased after2years of luke-warm democratization and devolution.
One of the reasons that outsiders, including human rights researchers, can't get their head around is why certain local security forces are protecting Muslims and Rakhines in one place and other local forces were siding with the Rakhine skin-heads in slaughtering the Rohingya and Muslims. That was precisely because the troops were given different orders from central command, depending on the contexts. This seeming contradiction was meant to give the general international impression that the government is UNABLE or UNWILLING to end the 'sectarian conflict/violence'. This comes up far short of capturing the central role the State itself is playing through various sophisticated techniques of outsourcing and incitement of large scale attacks on the Rohingya and toalesser extent the other Muslims.
# 8 President Inquiry Commission
Established on 16 August 2012 in the face of the mounting threats from the Organization of the Islamic Conference of 57 UN member states, Naypyidaw scrambledadiverse group of 27 Burmese and showcased them as "independent-minded upstanding citizens" who will get to the bottom of the "sectarian violence" in Arakan State. Well, at the bottom is Naypyidaw. Why would the generals and ex-generals want to anyone to sniff for real truths and share them with the whole wide world?
They know exactly what transpired – because they have been involved in the attempted genocide for nearly 40 years. So, as glamorous and respectable sounding as it is, the Presidential Inquiry isadecoy,aploy and one of the biggest jokes of contemporary Myanmar!
#7Where is "democratic" Myanmar heading after Rohingya ethnic cleansing or genocide?
An institutionalized Apartheid in Western Burma and anti-Muslim racist behavior across the country – and all kinds of racism against the Chinese, Christians, etc.
# 8 What are the gains for Naypyidaw?
Too many to list. But haveaglance here
A potent version of traditional "Buddhist" racism and racialism have been revived in the service of the militant and militaristic "democratic" government which now speaks softly, that is, getting better at spins but remains as ruthless and callous as it has ever been since 1962 coup. Monks are happy with the regime. NLD has no real voice or power in the Parliament, no intellectual or policy input other than calling for greater deployment of troops in the conflict/violence-prone Arakan State. Plus its leader Daw ASSK has been making utterances without having done her homework about Bangladesh and its alleged illegal immigrants to Burma (while Thein Sein cleverly downplayed this issue in his VOA Burmese interview with Than Lwin Htun after the -expel-or-cage-the-Bangali illegals fiasco – during the meeting with the visiting UNHCR head5months ago).
#9 Does this all sound conspiratorial? You betcha!
The Generals do NOT inherit power or influence – 99% of them do NOT have famous dead fathers or grandfathers or -mothers. They know it. Everything they have they have worked at it. We can say they have "earned" the power to rule through CONSPIRING tirelessly round the clock.
They have plans A-Z in order to make sure 1) they do NOT ever have to give up the ultimate control over Burma's political and power institutions and 2) Aung San Suu Kyi never becomes head of state or have any real power in Burmese politics, beyond the illusion of policy influence.
Welcome to our ugly majoritarian neo-Fascist democracy run by militarists!
Posted: 25 Nov 2012 05:16 AM PST
Wong Tack: 'Kami akan duduk hingga esok pagi'
"Permohonan pun tiada. Jadi kami memang melarang," kata Nasaruddin. -mk
Dianggarkan 15,000 aktivis meneruskan perarakan jalan kaki menuju Dataran Merdeka walau pihak berkuasa melakukan sekatan di kawasan tumpuan popular itu.
Perarakan hari ini melibatkan jarak terakhir sejauh 42 kilometer daripada kawasan bekas ibu pejabat PAS di Gombak – tempat mereka bermalam pada malam tadi.
Ia dimulakan dengan penyertaan seramai 2,000 aktivis, termasuk beberapa keluarga, dikawal anggota unit amal PAS dengan pemerhatian anggota polis.
Seorang peserta, BC Tan, 30, dari Pulau Pinang yang menginap di Markaz Tarbiyah PAS, Taman Melewar malam tadi, beliau berasa terharu apabila mereka disambut baik untuk bermalam di sana.
"Bagus. Tempat itu semua kemudahan ada. Kita juga Disambut baik.
"Saya terharu dapat duduk sana sebab jarang pergi," katanya yang mula mengikuti perarakan ini dari Taman Rimba, Gombak.
Kumpulan itu mengibarkan bendera Himpunan Hijau dan melaungkan slogan "Hentikan Lynas" sepanjang perjalanan melalui Lebuhraya DUKE, Kampung Railway dan Sentul Pasar.
Antara yang menarik perhatian orang ramai ialah seorang peserta dari Pahang, yang memulai perarakan dari Kampung Awah di Pahang dengan memusingkan gegelung hula hoop di badannya.
Katanya, beliau akan berhenti memusingkan ketika berhenti rehat.
"Saya tak berhenti dari Kampung Awah. Saya pusingkan benda ini. Bila makan baru saya berhenti," katanya.
Ketika berhenti rehat di Kampung Railway, ketua kumpulan berkenaan Wong Tack dalam ucapannya memberi pesanan bahawa Dataran Merdeka bukanlah destinasi mereka yang terakhir.
"Kita akan bermalam di sana dan menunggu matahari terbit esok," katanya.
Beberapa kumpulan lagi menyertai kumpulan besar itu beberapa lokasi sekitar laluan perarakan - menjadikan jumlah peserta bertambah kepada 5,000 orang.
Kumpulan berkenaan seterusnya melalui Jalan Sentul, Jalan Ipoh dan Jalan Tun Razak dengan disambut dengan bunyi hon oleh pengguna kenderaan di jalan berkenaan.
Kumpulan seramai 5,000 orang itu kemudiannya dianggarkan bertambah menjadi 10,000 orang apabila bergabung dengan satu kumpulan lagi di persimpangan Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Jalan Sultan Ismail di pusat Bandar Kuala Lumpur.
Jumlah itu kemudiannya meningkat kepada 15,000 orang apabila kumpulan berkenaan tiba di persimpangan Jalan Perak - Jalan Tuanku Abdul Rahman pada kira-kira jam 4.50 petang.
Kumpulan berkenaan seterusnnya membanjiri sepanjang Jalan Tuanku Abdul Rahman dan kawasan sekitar kawasan Dataran Merdeka memandkan lokasi berkenaan ditutup pihak berkuasa.
Turut dilihat dalam perarakan itu ialah dua MP PKR Tian Chua serta Nurul Izzah Anwar dan juga pengerusi bersama BERSIH Datuk S Ambiga. -mk
15,000 aktivis Himpunan Hijau hampiri Dataran
KUALA LUMPUR, 25 Nov — Himpunan Hijau tetap akan meneruskan rancangan menuju ke Dataran Merdeka walaupun pada ketika ini pihak polis dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sudah menutup kawasan tersebut seawal pagi tadi dengan meletak notis tidak membenarkan sebarang aktiviti berjalan disitu.
"Ya, ya kami tahu mereka sekat Dataran Merdeka.
"Rancangan menuju ke sana masih akan diteruskan seperti biasa dan tidak akan dibatalkan," kata ketua publisiti himpunan tersebut, Lee Chean Chung.
Penyokong menunjuk mesej "Stop Lynas" pada topi jeraminya.
Menurut Lee yang dihubungi The Malaysian Insider, mereka ketika ini sedang dalam perjalanan daripada Sentul dan dijangka tiba di Maju Junction kira-kira jam 3.
30 petang ini.
"Kami akan berkumpul dan bergerak ke Dataran Merdeka sebaik tiba di Maju Junction," tambah beliau.
Dalam laporan media pagi tadi, hampir kira 100 orang anggota penguatkuasa yang terdiri daripada polis dan pegawai DBKL sudah bersiap sedia di Dataran Merdeka yang dijadualkan berlangsungnya Himpunan Hijau pada hari ini.
Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Ahmad Phesal Talib juga turut mengeluarkan notis larangan kepada orang awam berkumpul di lokasi tersebut.
Selain itu, Lee juga mengesahkan kira-kira 2,000 lebih peserta himpunan terdiri daripada aktivis, keluarga dan lain-lain akan berarak ke sana.
Semalam, kumpulan tersebut telah bermalam di markas tarbiyah PAS di Taman Melewar, Gombak dan telah bergerak melalui Lebuhraya DUKE, Kampung Railway dan Sentul Pasar pagi tadi.
Dalam pada itu, tinjauan wartawan The Malaysian Insider yang berada di lokasi Maju Junction mendapati orang ramai semakin beransur-ansur banyak tiba dan berkumpul, kira-kira 200 orang peserta.
Ramai yang memakai baju hijau dan mengibarkan bendera Himpunan Hijau serta bersorak "hentikan Lynas" di sepanjang tepi jalan sambil menunggu rakan-rakan mereka tiba yang masih sedang berjalan dari Sentul.
Orang ramai yang berkumpul terdiri daripada lapisan umur tua dan muda, pelbagai kaum dan agama yang sudah datang berkumpul.
Perarakan hari ini melibatkan jarak terakhir sejauh 42 kilometer.
Dalam pada itu, ketua kumpulan tersebut telah dalam satu ucapannya di Sentul pagi berkata mereka akan bermalam di Dataran Merdeka hingga pagi esok.
"Kita akan bermalam di sana dan menunggu matahari terbit esok," katanya dipetik daripada Malaysiakini TMI
Posted: 25 Nov 2012 03:19 AM PST
The yearly Umno General Assembly is back again.
It'll be an adrenaline pumping week for Umno delegates from all over the country.
They'll be in their best attires, proudly cradling the honour of attending the PAU.
I have never beenadelegate..once or twice I was one of those lingering outside, watching the big screen placed at certain corners.
The days when my x other half use to get that chance, I seldom tagged along..he too got tired of inquiring whether there were any spare observer's tag.
Somehow, I managed to clear the disappointment..I didn't care anymore.
I learned to hate such crowded places after crossing with quiteanumber whom I thought were not so bright-minded, but yet, managed to snootishly earned themselves as Umno delegates...so much for being my humble self.
I got envious seeing wives of very big shots scurrying together, looking so glamourous and glitzy, and gettingaspecial, VIP door to get themselves special seatings inside the PWTC hall.
Yes..one can get quietly jealous.
The inferiority complex can bubble up like mixing coke withamentos.
Thus, it wasagood excuse to stop whining.
No need to be jostling, scrambling and getting crushed at the public entrance.
Having to shriek like mad once was enough experience.
Nevertheless..Umno General Assemblies are undeniably full of grandeur.
They have great food and all delegates are given first class accomodation and ample pocket money.
Awesome dinners held by VVIPs awaits them too.
Afterall, they are all considered special guests.
Most speeches are well-prepared, lively and intertwined with lots of puns and rib tickling jokes
Delegates love this mode.
It helps to make the sleepy wide-eyed too.
There are delegates who'd obviously go missing in action intermittently..whatawaste.
By right, the genuinely interested ones should have been given the opportunity to attend.
Appearing on the last day for the closing speech by the Umno President is quiteanormal scenario.
These truant delegates must have either gone shopping or had stayed out late at night.
Umno delegates and their supporters will definitely add colour and bustle to the city even more this week...there'll beanoticeable influx of Umno members in the capital.
For sure, the prestigious UMNO general assembly will as usual beatruly thrilling, highly charged meeting of huge national importance.. commanding without doubt constant international attention.
InsyaAllah hopefully, Umno will continue to stand as the strongest, leading Muslim Malay party.
Posted: 25 Nov 2012 01:18 AM PST
Georgetown – Seorang ibu tergamam seketika, selepas anak perempuan bongsunya menceritakan dia dicabul jirannya yang merupakan anggota polis di Air Itam, tahun lalu.
Gambar: Mohd Aziri cuba menutup mukanya dengan jaket yang dibawanya.Ibu kepada lima orang anak berkata demikian ketika memberikan keterangan dari kandang saksi di Mahkamah Sesyen, di sini, semalam.
Menurut wanita itu, insiden itu diceritakan anaknya pada suatu malam. Iaitu lima hari selepas seorang jiran wanita di situ memaklumkan bahawa melihat anggota polis itu memeluk mangsa dengan begitu erat.
"Ketika jiran menceritakan hal itu, pada awalnya saya beranggapan, lelaki itu memeluk anak saya kerana dia seorang penyayang dan suka pada kanak-kanak.
"Perkara sebenar terbongkar selepas anaknya sendiri menceritakan tindakan anggota polis itu.
"Kira-kira jam 9.30 malam, pada 12 Jun tahun lalu, anak perempuan dan saya berada di rumah. Masa itu, kami mendengar bunyi bising dari luar seperti kemalangan. Kami pergi untuk tengok dan melihat sebuah kereta yang dipandu Koperal Mohd Aziri Sahid," katanya pada hari pertama perbicaraan kes itu dimulakan di Mahkamah Sesyen, di sini, semalam.
Menurutnya, selepas itu, dia dan anak perempuannya kembali untuk menonton televisyen.
"Kira-kira jam 10.30 malam, saya kata kepada anak sekarang masa untuk tidur. Kami masuk tidur di bilik yang sama.
"Masa itulah, anak perempuan saya memberitahu kepada saya bahawa 'pak cik' (Mohd Aziri) memeluk dan mencabulnya.
"Saya terkejut dan tergamam selama lima minit memikirkan sesuatu telah berlaku kepada anak saya," katanya.
Mohd Aziri yang didakwa mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan iaitu kesalahan luar tabii dengan memasukkan jari ke dalam kemaluan mangsa, di Lebuhraya Thean Teik, Bandar Baru, di sini, di antara 28 Mei hingga 21 Jun, tahun lalu.
Mohd Aziri yang merupakan penjawat awam, kini berdepan dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh disebat, jika sabit kesalahan.
Dalam keterangan ibu mangsa, pada 14 Jun tahun lalu, Mohd Aziri datang ke rumahnya dan memegang tangan suaminya dan memohon maaf. "Lelaki itu berkata, dia hanya mendukung anak saya di tangga dan dengan tidak sengaja dia tersentuh tempat sulit anaknya.
"Beliau turut memohon maaf dengan saya dan mengatakan sekiranya saya memaafkan dia, saya adalah insan yang paling baik di dunia ini. Dia turut mengambil pistol dan meletakkan di kepalanya menyatakan dia akan mengancam nyawanya sendiri, sekiranya saya membuat laporan polis.
"Beliau berkata saya harus bersyukur kepada ALLAH mempunyai seorang anak perempuan cantik," katanya.
Sebelum itu, Mohd Aziri dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Majistret dari tuduhan mencabul kehormatan mangsa yang sama.
Majistret Noor Aini, membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan yang dikemukakan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Nur Farhana Hashim.
Untuk kesalahan itu, dia dituduh mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan yang mengenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun, denda atau sebat atau mana-mana daripada itu, jika sabit kesalahan.
Bagaimanapun, kegembiraan anggota polis itu tidak kekal lama, apabila dia dikejutkan dengan satu lagi tuduhan baru di Mahkamah Sesyen untuk tuduhan hubungan seks dengan kanak-kanak bawah umur itu.
Hakim Mahkamah Sesyen, Zanol Rashid Hussain menetapkan 11 Januari tahun depan untuk mendengar keterangan saksi yang seterusnya.
Mohd Aziri telah diwakili peguam, Rosli Ismail manakala kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Nur Ashikin Mokhtar. -SH
Posted: 24 Nov 2012 11:30 PM PST
The female dentist prepares the needle to give the bloke with the toothache an anaesthetic injection.
"No way! No needles, I hate needles!" the bloke said.
And the man objects again. "I can't do the gas thing either. The thought of having the gas mask on my face makes me faint!"
She then asks the man if he has any objection to takingapill.
When she returns she says, "Here'saViagra andaglass of water."
The man says, "Wow! I didn't know Viagra worked asapain killer!"
"It doesn't" she said, "But it'll give you something to hold on to while I pull your tooth out."
Thanks to SKT who sent me this joke which I am posting for laughs. Haveagreat day!
Posted: 25 Nov 2012 12:36 AM PST
Gambar Print Screen dari FB ahli Umno tegar yang mempertikai tindakan Hj Hadi solat di Kubur. (Sila klik untuk lebih jelas)
Terserlah kejahilan berliau kerana mempersenda tindakan presiden Pas ini dengan mengatakan "Pas semua BOLEH.... tanam dulu baru solat jenazah."
Ini akibat malas mengaji ilmu agama, memang bagi orang yang jahil tentang agama mereka akan merasa pelik melihat orang bersolat di kubur kerana benda seperti ini memang jarang2 orang melakukanya. itu yang menyebabkan mereka merasakan ianya janggal dan pelik .
Untuk merungkaikan permasalah yang di bangkit oleh saudara jahil dari Umno tergar ini di bawah ada jawapan yang saya petik dari FB ustaz azhar Idrus berserta video mengenai solat ghaib .
Moga dengan ini kita dapat sedikit manafaat ilmu dari permasalahan ini.
Isu solat jenazah dikubur. Ustaz Azhar Idrus jawab..
Nas & Hukum Solat Jenazah Di Tanah Perkuburan.
Hadis riwayat Abdullah bin Abbas ra.: Bahwa Rasulullah saw. solat jenazah di atas kubur, sesudah mayat dikuburkan. Beliau bertakbir empat kali.
(Shahih Muslim No.1586) Hadis riwayat Abu Hurairah ra : Bahwa seorang berkulit hitam yang biasa membersih masjid, suatu hari Rasulullah saw. merasa kehilangannya (sbb tidak melihatnya).
Lalu beliau bertanya kabarnya, para sahabat menjawab: Dia sudah meninggal dunia. Rasulullah saw. menegur: Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Seakan-akan para sahabat menganggap kecil urusannya atau urusan kematian. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Tunjukkan aku kuburnya. Setelah ditunjukkan, beliau solatkan jenazahnya kemudian bersabda: Sungguh pekuburan ini penuh dengan kegelapan bagi para penghuninya dan sesungguhnya Allah meneranginya sebab salatku atas mereka. -(Shahih Muslim No.1588)
Kata Prof. Dr. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam Pedoman Shalat ms 496 :
Para ulama menyukai kita shalat jenazah di perkuburan dengan berdiri di antara kubur-kubur. Begitulah pendapat Imam Atha' , Asy Syafi'y, Ahmad, Ishaq dan Ibnul Mundzir.
Pernah hal ini dilakukan oleh Abu Hurairah dan Umar Ibn Abdul Aziz r.a.
Hadis yang di rujuk :
Ibnu Abbas r.a berkata: " Pada suatu hari Rasullah s.a.w sampai kekubur yang masih basah, maka beliau bersalat baginya dan bersaf-saflah para sahabat di belakang beliau. Rasullah s.a.w. bertakbir4kali. ( H.R. Bukhary, Muslim, An-Nail 4:89)
Sa'ied ibn Al-Musayyab berkata: "Bahawasanya Ummu Sa'din meninggal sedang Nabi s.a.w tidak ada di kampung. Manakala kembali, beliau bersalat bagi jenazahnya, padahal telah berlalu sebulan lamanya (H.R At-Turmudzy, An-Nail 4:90)
Syed Sabiq menambah, menurut satu pendapat dari Ahmad, hal ini tidak ada salahnya, kerana Nabi s.a.w. melakukan solat di suatu kubur yang berada di tengah perkuburan.
Dan Abu Hurairah sembahyangkan Aisyah di tanah perkuburan Al Baqi dengan disaksikan oleh Ibnu Umar.
Dan Umar Abdul Aziz juga ada melakukannya.
Kesimpulannya solat jenazah ditanah perkuburan adalah amalan Rasulullah saw dan para sahabat ketika tidak sempat solat sebelum jenazah dikebumikan.
Dipetik dari Ustaz Azhar Idrus ( Original )
Posted: 24 Nov 2012 09:21 PM PST
Dataran Merdeka tiba-tiba ditutup dipercayai untuk menghalang kemaraan pejalan kaki Anti-Lynas dari memasuki perkarangan tersebut yang dijangka tiba kira-kira jam 4.00 petang ini.
Kembara Himpunan Hijau yang memasuki hari ke-12 semalam telaj memecahkan rekodnya sendiri dengan kehadiran hampir 2,000 orang berjalan kaki dari Taman Rimba Templer ke plaza tol Gombak, Lebuh Raya Kuala Lumpur-Karak, lapor malaysiakini.
Perjalanan sejauh hampir 10 kilometer itu yang pada asalnya dijadualkan bermula jam9pagi diawalkan setengah jam apabila ia menerima penyertaan lebih ramai peserta hari daripada 11 hari lepas, kata pengerusi Himpunan Hijau, Wong Tack.
Kembara Himpunan Hijau sejauh 300 kilometer dari Kuantan ke Kuala Lumpur ini bermula pada 13 November lalu sebagai kembara protes Wong Tack untuk mewujudkan kesedaran politik dan alam sekitar menentang loji memproses nadir bumi Lynas.
Keazaman beliau turut disambut empat lagi NGO alam sekitar lain - Jawatankuasa Membantah Sianida Raub, (Ban Cyanide Committee), gabungan NGO Pengerang, dan NGO anti-empangan Murum.
Kumpulan pejalan kaki ini sedang berehat di plaza tol Gombak sebelum berjalan sejauh lapan kilometer lagi ke Markas Tarbiyah PAS Taman Melewar.
Esok, mereka akan meneruskan perjalanan ke Dataran Merdeka dari Gombak sebelum menyerahkan memorandum kepada ahli parlimen yang digesa turun bertemu mereka di dataran.
"Hati kami sudah berada di Dataran Merdeka, kerana itulah langkah kaki kami akan menuruti suara hati kami sekarang ini," kata Wong Tack yang kelihatan penat tetapi masih bertenaga.
Pejalan kaki anti Lynas tiba di Taman Melewar
KUALA LUMPUR: Kumpulan pejalan kaki Stop Lynas tiba di Kolej Universiti Islam Zulkifli Mohamed (KUIZM), Taman Melewar, tepat jam4petang ini, diiringi Yang DiPertua PAS Batu, Cikgu Ishak Surin.
Sebelum itu, mereka berarak dari Tol Gombak, bermula jam3petang dan disambut meriah oleh PAS Batu. Kumpulan tersebut turut diiringi beberapa kenderaan berpacuan empat roda sepanjang perjalanan dari Tol Gombak ke Taman Melewar.
Ironinya, biarpun kebanyakan di kalangan mereka berbangsa Cina, namun ketibaan mereka disambut oleh pelbagai pihak agama dan bangsa, yang menunjukkan solidariti mereka dalam usaha menghentikan sebarang pembangunan atau projek yang menyumbang kepada kemusnahan alam sekitar dan kesihatan rakyat.
Ketibaan mereka disambut dengan tepukan dan sorakan 'Stop Lynas', 'Close The Damn', 'Stop Baram' dengan penuh bersemangat, biarpun keletihan dan kepanasan terpancar di wajah mereka.
Turut kelihatan bersama-sama mereka Exco Kerajaan Negeri Selangor, Ronnie Liu; Timbalan Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, Salbiah Wahab.
Pengerusi Himpunan Hijau, Wong Tack yang mengetuai kumpulan pejalan kaki Stop Lynas ketika ditemui, berkata pihaknya gembira kerana berjaya sampai ke destinasi seterusnya, sebelum ke destinasi selanjutnya.
Mengakui perjalanan sejauh lebih 300 kilometer dari Kuantan sejak 13 Nov lalu, mempunyai pelbagai ranjau dan cabarannya, namun keletihan yang diharungi hilang sekelip mata apabila terdapat kenderaan yang membunyikan hon sebagai tanda sokongan.
"Kita berjaya sampai di sini, dengan pelbagai cabaran yang dihadapi.Kita tidak mempunyai masalah sepanjang perjalanan, kerana kita jaga dari seluruh aspek. Dari segi keselamatan, lalulintas, semuanya tidak bermasalah," tegas beliau sebelum dibawa berehat di Markaz PAS Batu, berhampiran Taman Melewar.
Sebelum meninggalkan Taman Melewar untuk berehat di Markaz PAS Batu, berhampiran Taman Melewar, Wong Tack sempat berkata perjalanan kumpulannya dari Kuantan tidak bermasalah, sebaliknya bersedia untuk menghadapi sebarang kesulitan dan kekangan untuk perjalanan seterusnya.
"Sepanjang jalan dari Kuantan ke Kuala Lumpur, tiada masalah. Esok, tidak tahulah," ujar beliau sambil ketawa kecil.
Sekumpulan pejalan kaki Stop Lynas kini sedang berehat di ruang-ruang legar di KUIZM ini dengan dilayan dengan makanan dan minuman.
Difahamkan, sebahagian besar di kalangan pejalan kaki ini akan bermalam di sini, pada malam ini dan akan berarak ke Dataran Merdeka, bermula jam9pagi.
Malam ini juga, di KUIZM, akan berlangsung ceramah umum membabitkan Timbalan Presiden PAS, Mohamad Sabu, Che'gu Bard, Cikgu Ishak Surin.
Sementara itu, Cikgu Ishak ketika ditemui, berkata PAS Batu berbesar hati menyambut kumpulan Stop Lynas ini yang dianggap sebagai pejuang rakyat.
"Dengan semangat mereka berjalan kaki dan bertanggungjawab unuk menentang Lynas, kita juga bertanggungjawab memberikan penghormatan kepada mereka dengan menyediakan makan minum, dan tempat tinggal kepada mereka," tegas beliau.
Sambil mengharapkan perjalanan kumpulan ini ke Dataran Merdeka esok berjalan lancar, beliau turut menyeru ahli-ahli PAS, khususnya PAS Batu untuk bersama-sama berjalan ke Dataran Merdeka.
"Tujuan mereka murni, jadi tiada sebab untuk dihalang mereka ke Dataran Merdeka. Menghalang mereka hanya menunjukkan tindakan yang amat tidak wajar. Saya harapkan mereka ini diberi kesempatan utk berada di Dataran Merdeka," kata beliau.
Dalam pada itu, Ketua Pemuda PAS Batu, Abu Bakar Abdul Rahman berkata, Pemuda PAS Batu akan turut bersama-sama mereka ke Dataran Merdeka keesokan harinya. -HD
Posted: 24 Nov 2012 07:24 PM PST
When you have an I Hate My Job day' , even if you're retired try this out:
Stop at your pharmacy and go to the thermometer section and purchasearectal thermometer made by
* & *.
Change into very comfortable clothing and sit in your favorite chair.
You will notice that in small print there isastatement:
"Every Rectal Thermometer made by * & * is personally tested and then sanitized."
Now, close your eyes and repeat out loud five times : I am so glad I do not work in the thermometer quality control department at * & *.
HAVE A NICE DAY; AND REMEMBER, THERE IS ALWAYS SOMEONE ELSE WITH A JOB THAT IS MORE OF A PAIN IN THE A** THAN YOURS!
Remember, if you haven't gotasmile on your face and laughter in your heart....
Maybe you should go and work for Johnson and Johnson!
Thanks to Freddie who sent me this old joke which I have posted before.
I am re-posting it for the benefit of those who may have missed this post.
[VIDEO] Deepak, Kawan Rosmah, Dedahkan Diberi Amar...
Konon Hooligan,Konon Terer dan Power..
Our rubber is only for condoms?
The Rise Of The Supercrips
Sejak Bila Di Atas Dunia Ini Ada Undang-undang Hal...
Esplanade: Trees chopped down
Someday.. we'll meet again ^_^
My old Seang Tek Road neighbourhood
Salam Maal Hijrah 1434/ Awal Muharram
3 Anggota Polis Yang Didakwa Merogol Bakal Didakwa...
Niat Nurul Izzah Berdakwah Kepada Bukan Islam
A true moron he is!
Dunia Saksikan Obama Berani Debat, Tetapi Najib Pe...
Royal Facebook slur: Johor police probe Huff Post?...
[TEPAT] Kajian UM: Pengundi BN Merosot Disebab Int...
Pemimpin Sabah Cepat-cepat Masukkan RM40 juta Ke D...
[BERGAMBAR] 1103 BERSIH: Puluhan Ribu Rakyat Berh...
Wheelchair Inaccessible Kuala Lumpur
When ministers ignore blogs...